राष्ट्रपति ट्रम्पले नै राष्ट्रगान भूलेपछि ...
राष्ट्रपति ट्रम्पले नै राष्ट्रगान भूलेपछि …
एजेन्सी, २६ पुस । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अट्लान्टाको एउटा कलेजको फुटबल म्याचमा राष्ट्रगान गाएपछि उनीबारे दुईथरीका प्रतिक्रिया आउन शुरु भएको छ । उक्त म्याचमा उनको भरपूर स्वागतका साथै उत्तिकै आलोचना पनि भएको छ ।
कलेजको खेललाई औपचारिक रुपमा शुरु गर्नु अघि गाइएको राष्ट्रगानमा राष्ट्रपति ट्रम्पको गाउने शैलीप्रति सामाजिक सञ्जालमा तिखो प्रहार गरिएको छ । मानिसहरुले राष्ट्रपतिले राष्ट्रगानको शब्द भुलेको भन्दै उनको आलोचना गरेका थिए ।
उनले राष्ट्रगान गाउने समयमा कैद भएको भिडियोमा वास्तवमै सम्पूर्ण शब्दहरु नबोलेको देख्न सकिन्छ । भिडियोमा उनले गाउन बिस्तारै शुरु गरेको, कहिले शब्द उच्चारण गर्दै त कहिले चुपचाप उभिएको देखिन्छ । उनले भिडियोमा राष्ट्रगानका शब्दहरुलाई ठाँउ-ठाँउमा छोडेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
भिडियोमा उनले ‘ब्राइट स्टार्स’ र ‘द लेण्ड अफ द ट्री एण्ड द होम अफ द ब्रेभ’ जस्ता पंक्तिहरु उत्साहका साथ गाएको देख्नसकिन्छ । उनले राष्ट्रगानको अन्तिममा मुस्कुराउँदै गाएपनि अन्य पंक्तिहरु भने पूर्णरुपमा गाएका छैनन् ।
तर अर्कोतर्फ ट्रम्पका समर्थकहरुले भने उनले राष्ट्रगानको समयमा आफ्नो छातिमा हाल राखेर उभिएको देख्दा गर्व महसुस हुने बताएका छन् ।
माकुराले कब्जा गरेको ग्रिसको यो शहर
राष्ट्रपति ट्रम्पकी छोरी इभांकाको सौन्दर्य तारिफका लागि अन्तरिक्षबाटै फोन आएपछि….
तितेपातीबाट तेल !
विश्ककै महंगो निलो बिच्छूको विष प्रति लिटर ७६ करोड
पहाड जत्रो बन्दा फलाउने किसान पुरस्कृत
मोटरसाइकलमा आएकाले घाँटीको ३ तोलाको सिक्री लुटी फरार
एउटा यस्तो जेल जहाँ कैदीहरुलाई अपार्टमेन्टमा राखेर वैवाहिक सुख दिइन्छ
एन्टिबायोटिक अाैषधि खाएपछि जिब्रोमा रौँ
बहुमूल्य रुबीले उठिबास, गाउँलेहरु भन्छन्– यो हाम्रा लागि अभिशाप भयो
भुटानी पूर्वप्रधानमन्त्रीले श्रीमतीलाई पिठ्युमा बोकेपछि …
पिताले छोरीलाई स्तनपान गराएको तस्बिर भाइरल
मानिसदेखि पशुपंक्षीसम्म दृष्टिविहिन रहेको गाउँमा जब वैज्ञानिक पुगे …
जिउँदै सर्प निलेपछि …
सुपमा मुसा भेटिएपछि रेस्टुरेन्टले गुमायो १९ करोड डलर
श्रीमतीलाई परपुरुषसँग रंगेहात पाएपछि श्रीमान्ले राखे यस्तो अनौठो माग
११ वर्षीय बालक जसले चिकित्सा विज्ञानलाई रनभूल्ल बनाइरहेका छन्
एउटा यस्तो पोखरी जहाँको पानी नमिसाई स्थानीयवासीको खाना पाक्दैन !
जब मारिएका बालबालिकाको न्यायका लागि अभिभावकले सडकमा नाक रगडे …